Hlola i-Hong Kong - World Tourism Portal
Hlola i-Hong Kong
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseHong Kong
Bukela ividiyo ekhuluma ngeHong Kong
Hlola i-Hong Kong, iSifunda Sokulawula esikhethekile (i-SAR) sePeople's Republic of China. Yindawo enobuntu obuningi ngenxa yokuba bobabili abangamaCanton aseChina futhi bebengaphansi kwekoloni laseBrithani. Namuhla, ikoloni laseBrithani langaphambili liyindawo enkulu yezokuvakasha lapho iningi labantu abasemazweni asezingeni eliphakeme lase China liqhubeka khona. Kuyisizinda esibalulekile eMpumalanga Asia ngokuxhumeka komhlaba wonke emadolobheni amaningi omhlaba. Yindawo eyahlukile eye yathatha abantu namathonya amasiko kusuka ezindaweni ezahlukahlukene njengeVietnam futhi Vancouver futhi ngokuziqhenya imemezela ngokwayo njengeDolobha Lomhlaba Lase-Asia.
IHong Kong ingenye yezifunda ezimbili ezikhethekile ze-Administrative Regions (SAR) zaseChina (esinye lesi Macau). Ngaphambi kokudluliselwa kobukhosi eChina e1997, iHong Kong ibiyikoloni laseBrithani iminyaka ecishe ibe yi-150. Njengomphumela, ingqalasizinda eminingi ifa ukwakheka kanye namazinga eBrithani. Ngesikhathi sama-1950s ukuya kuma-1990s, umbuso wedolobha wathuthuka ngokushesha, waba owokuqala wama "Tiger Ama-Asia amane" ngokuqalwa kwesizinda esiqinile sokukhiqiza futhi kamuva nomkhakha wezezimali. IHong Kong manje isidume ngokuba yisikhungo esihola phambili sezezimali eMpumalanga Asia, ngokuba khona kwamabhange endawo namanye amabhange aqashelwa emhlabeni jikelele. IHong Kong idume futhi ngoguquko lwayo lokuchibiyela, ihambisa umthamo omkhulu wokuthumela ngaphandle kusuka eChina uye kuwo wonke umhlaba. Ngokuzimela kwayo kwezombusazwe nakwezomthetho, iHong Kong yaziwa njenge-Pearl yaseMpumalanga enokuhlanekezela kwethonya laseBrithani kusiko.
IHong Kong ingaphezulu nje kwedolobha eliyitheku. Isihambi sikhathele yimigwaqo yaso egcwele abantu bangase balingeke ukuyichaza njengeHong Kongcrete. Kodwa, le nsimu enezintaba ezinamafu neziqhingi ezinamadwala iningi layo liyindawo yasemakhaya. Iningi lezindawo ezisemaphandleni lihlukaniswa njengeLive Park futhi, yize abantu abayizigidi ze-7 bengakaze babe kude, kungenzeka ukuthi uthole amaphakethe asehlane ozovuza izivakashi ezizimisele ngokwengeziwe.
Ukutholwa kwemivubukulo kungukuqala kokuhlala kwabantu kule ndawo emuva eminyakeni engaphezu kwe-30,000 edlule. Yaqala ukufakwa e-China phakathi kwe-Qin Dynasty futhi yahlala ngaphansi kokubusa kwe-China kuze kube i-1841 ngesikhathi se-Qing Dynasty, ngesiphazamiso esifushane ngasekupheleni kwe-Qin Dynasty, lapho isikhulu se-Qin samisa umbuso weNam Yuet, kamuva owawa kuyo Isizukulwane sakwaHan.
Iningi labantu baseHong Kong ngabakwaHan Chinese (93.6%), iningi lamadlozi amaCanton, yize kunamanani amakhulu amanye amaqembu aseChina anjengeChiuchao (Teochews), Shanghainese neHakkas. Inani elikhulu lamaNdiya, amaPakistan nawaseNepalese bahlala lapha futhi, futhi abaningi banemindeni eye yahlala eHong Kong izizukulwane eziningana.
Inani elikhulu lePhilipinos, Indonesians, neThais, iningi labo elisetshenziswa njengabasizi basekhaya nabo bahlala eHong Kong. NgamaSonto, usuku lwamahhala lwabasebenzi basemakhaya abaningi, bahlangana ezinkulungwaneni eziseCentral nase-Admiralty futhi bachitha usuku lapho bendawonye, ​​behleli bexoxa, bedla futhi bephuza nomaphi lapho kukhona isikhala samahhala. Imigwaqo eminingana ephelele endaweni eseCentral ivaliwe ngenxa yabasizi basekhaya abavela kwamanye amazwe ngamaSonto.
IHong Kong iyikhaya labantu abaningi abavela kulo Australia, IYurophu, iJapan, iKorea kanye neNyakatho Melika, okwenza kube yidolobha lamazwe omhlaba ngempela.
Abantu baseHong Kong bagcinwe ngandlela thile, kodwa banomusa kakhulu, ikakhulukazi ezinganeni.
IHong Kong inesimo sezulu esishisayo esishisayo, kodwa sipholile ebusika umoya wasolwandle oshisayo. Ihlobo (ngoJuni kuya kuSeptemba) lide, linomswakama futhi lishisa ngamazinga okushisa avame ukwedlula i-32 ° C kanye namazinga okushisa esikhathi sobusuku angaconsi ngaphansi kwe-25 ° C. Izivunguvungu zivame ukuvela phakathi kukaJuni noSepthemba futhi zingaletha ukumiswa kwemisebenzi yebhizinisi lendawo usuku noma ngaphansi.
Ubusika buhlala buncane kakhulu, futhi amazinga okushisa esikhathi esikhathi we-18-22 ° C kodwa nobusuku ancwila kwi-10 ° C nangaphansi kwesinye isikhathi, ikakhulukazi emaphandleni.
Isiqhingi saseHong Kong (East Coast, South Coast). Indawo yokuhlala yaseBrithani yangempela nokugxilwe kuyo ngokuyinhloko kubavakashi abaningi. Iningi lama-skyscrapers aphezulu kakhulu eHong Kong kanye nesikhungo sezimali kungatholakala lapha. Sekukonke, isiQhingi saseHong Kong sesimanje kakhulu futhi sicebile futhi singcolile kakhulu kunezinye izindawo zaseHong Kong. I-Peak iyiphuzu elide kunazo zonke kulesi siqhingi, ngokubukwa okuhle kakhulu namanani aphakeme kakhulu wempahla emhlabeni.
Peninsula enyakatho yeHong Kong Island, enokubukwa okuhle kwalesi siqhingi. Inikezela ngokuxubana okudala inxanxathela kwezitolo ezinkulu, izimakethe zemigwaqo kanye nezindawo zokuhlala. Njengoba inabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-2.1 abahlala endaweni engaphansi kwamakhilomitha-skwele angama-47, iKowloon enye yezindawo ezinabantu abaningi emhlabeni. IKowloon ifaka i-Tsim Sha Tsui, indawo yamahhotela amaningi wesabelomali neMong Kok, okuyisifunda sokuthenga. Idolobha laseKowloon likufanele ukuvakasha. Kugcwele izindawo zokudlela zakule ndawo, le ndawo idume ngokudla kwaseTha,, iWall City Park emangalisayo neKowloon Tsai Park enepaki yokubhukuda emangalisayo. Le ngenye yezindawo zokugcina edolobheni lapho ungathola khona izakhiwo eziphansi. Ukuhambahamba ukunambitheka kwempilo yasendaweni.
Izindawo Ezintsha. Ibizwe izikhulu zaseBrithani ngenkathi iqashwa kuhulumeni waseChina e-1898, amaNew New Territories aqukethe ukuxuba okuxakile kwamapulazi amancane, amadolobhana, ukufakwa kwezimboni, amapaki ezwe asezintabeni namadolobha anabantu abaningi njengamanye amadolobha.
Isiqhingi saseLantau. Isiqhingi esikhulu esisentshonalanga yesiQhingi saseHong Kong. Ngeke uthole amadolobhana amaningi adumile, kepha lapho nje usuzothola izinja ezidukayo nezakhiwo ezinamatshe amnyama uzothola izintaba namabhishi amahle. Lapha isikhumulo sezindiza, iDisneyland, kanye ne-Ngong Ping car cable.
Iziqhingi Zangaphandle. Izindawo ezaziwa ngempelasonto abantu bendawo, iziQhingi zase-Outlying iningi leziqhingi ezungeze iHong Kong Island. Amaphuzu avelele afaka i-Lamma, eyaziwa kakhulu ngokudla kwasolwandle kanye neCheung Chau, isiqhingi esincane esake saba umgede wepirates, kepha manje sheha izivakashi zasolwandle ama-aficionados, izivunguvungu zomoya kanye nabasha abahamba ilanga.
QAPHELA: Ukwenza imali ngokweqile kuyicala elingathí sina - ungahlawuliswa kuze kufike ku- $ 50,000 kanye / noma uboshwe iminyaka emithathu. Uma ungena eHong Kong njengesivakashi, akufanele uthathe noma yimuphi umsebenzi (okhokhelwayo noma ongakhokhelwanga), utadishe noma usungule / ujoyine ibhizinisi. Uma uhlose umsebenzi, utadishe noma usungula / ujoyine ibhizinisi, kufanele uthole i-visa efanelekile.
QAPHELA: Uma wehluleka ukumemezela noma yiziphi izinto ezivinjelwe noma okufanelekile, ungahlawuliswa kuze kufike ku- $ 1,000,000 kanye / noma ubhekane nesigwebo sejele esingafika eminyakeni emibili. Uma ubanjwe ushushumbisa izidakamizwa, ungahlawuliswa kuze kufike ku- $ 5,000,000 futhi ubhekane nokugqunywa ejele.
I-Hong Kong International Airport, itholakala enyakatho yeLantau Island nasentshonalanga yesiQhingi saseHong Kong. Idizayinwe nguSir Norman Foster, isikhumulo sezindiza savulwa ngoJulayi 1998 futhi selokhu kwathiwa "Isikhumulo Sezindiza Esibaluleke Kunazo Zonke Emhlabeni" yiSkytrax 8 izikhathi.
Izilimi ezisemthethweni zaseHong Kong ezibhalwe phansi ziyisiShayina nesiNgisi kanti izilimi ezisemthethweni ezikhulunywa isiCantonese nesiNgisi.
IHong Kong ayinamabhentshi emigwaqweni ukuhlala phansi. Ngenkathi kukhona "izindawo zokuhlala phansi" eziseduze, ngokuvamile okunzima ukuthola. Okuphawuleka kuphela yi-Promenade Yesifunda eseCentral neNtshonalanga Yesifunda eHong Kong phakathi kwetheminali yasesikebheni eseCentral Star nesikhungo somhlangano. Ngakho-ke kunconywa ukuletha isihlalo sokukanisa esigoqekayo ukuze uzungeze iHong Kong.
Ngokwengeziwe, izindawo zokudlela (ikakhulukazi ezishibhile nezisheshayo) zizokhetha ukuvela okusheshayo kwetafula. Konke lokhu kunezela ekuchitheni isikhathi esiningi ezinyaweni zakho. Ithuba lakho elihle kakhulu lokungaphumeleli ngokweqiniso- lokuphumula kwakho kuzoba izinhlaka ezihlukene zekhofi. Futhi anikela nge-Wi-Fi, ukuze usebenzise isikhathi sokubukeza uhambo lwakho.
Thola umbono omangalisayo weSiqhingi saseHong Kong esiVictoria Peak esiqongweni esikhulu, umumo we-Peak tower omile! Selokhu kwaqala ikoloni laseBrithani, iPeak yaba nomakhelwane abakhetheke kakhulu kule ndawo. AmaShayina endawo ayengavunyelwe ukuhlala lapha kuze kube ngemuva kweMpi Yezwe II. I-Peak Tower ineplatifomu yokubuka okubonakalayo nenxanxathela yezitolo enezitolo, indawo yokudlela enhle, neminyuziyamu. Kukhona imali yokuya phezulu. Uma unganalo ithikithi okwamanje, ungazama idokodo elingaphansi kwe-escalator yokugcina kunaleyo eshibilika phansi ngokushesha, ngoba imvamisa ayinabantu abaningi.
Kunezindawo eziningi zamagugu endabuko kulo lonke elaseHong Kong.
E-New Territories, uzothola:
I-Ping Shan Heritage Trail idlula ezinye zezinto zasendulo ezibaluleke kakhulu
Idolobhana laseHakka elibiyelwe ngodonga laseTsang Tai Uk
Fu Shin Street yendabuko Bazaar
I-Che Kung Temple
Indoda Mo Temple
Ithempeli lezinkulungwane eziyishumi zamaBuddha
IKowloon Walled City Park endaweni okukhona kuyo idolobha langaphambili laseKowloon
UChi Chi Nunnery
I-Wong Tai Sin Temple
Izindlu ezakhiwe eTai O
ISt John Cathedral iyisakhiwo esidala kunazo zonke esontweni laseNtshonalanga elisendulo esontweni. ISonto lika-St Andrew yiVictorian-gothic futhi libukeka ngendlela efanayo. I-Kowloon Union Church yasungulwa e-1927, iyisithunywa sevangeli esiseNgilandi esontweni lobuKhristu e-Hong Kong, yafakwa ohlwini lwezakhiwo zomlando zeBanga I eHong Kong.
Kuneminyuziyamu eyahlukahlukene eHong Kong enezindikimba ezahlukahlukene; Ngokuphikisana nomnyuziyamu omuhle kakhulu uMnyuziyamu Wezomlando waseHong Kong eKowloon, onikeza umbono omuhle kakhulu wesikhathi esedlule esithandekayo saseHong Kong. Hhayi ifomathi ejwayelekile yengilazi ngemuva kwengilazi yeminyuziyamu oyithola kwenye indawo eChina. Imidwebo emisha efana nokuhlekisa ngomgwaqo wesikhathi sobukoloni yenza umlando waba khona. Vumela cishe amahora amabili kuya kwamane ukubuka yonke imininingwane ngokuningiliziwe. Ukungeniswa kumahhala.
I-Kowloon ifaka neminye iminyuziyamu eminingi ethokozisayo kufaka phakathi i-Dialogue ebumnyameni, okuwumbukiso ebumnyameni ngokuphelele lapho kufanele usebenzise khona izinzwa zakho ezingabonakali ngokubona kwenkomba yomhlahlandlela ongaboni kahle, i-International Hobby ne-Toy Museum, ekhombisa amamodeli , amathoyizi, inhlanganisela eqanjiwe yesayensi, ubuciko bokukhumbula ama-movie nobuciko bobuciko bomhlaba kusuka emhlabeni wonke, iHong Kong Museum of Art, okuyindawo ehehayo, eyinqaba futhi engenakuphikiswa ekhombisa ubucwebe baseChinese, i-terracotta, uphondo lukabhejane nemidwebo yaseChina kanye nobuciko besimanje kukhiqizwe abaculi baseHong Kong, iHong Kong Science Museum, okuhloswe ngokuyinhloko ezinganeni, naseHong Kong Heritage Discovery Center.
ICentral inengxenye yayo yeminyuziyamu okubalwa kuyo uDkt Sun Yat-sen Museum, iHong Kong Museum of Medical Science, ekhombisa ukuthi uhlelo lokunakekelwa kwezempilo luvela kanjani emithini yasendulo yaseShayina iye emithini yesimanje yaseNtshonalanga, kanye neHong Kong Visual Art Center.
I-New Territories ineMyuziyamu Wamagugu waseHong Kong, ozoheha labo abanesifiso esibi esikweni lamaShayina, kanye noMnyuziyamu weSitimela waseHong Kong.
I-Wong Tai Sin Temple, eyaziwa ngabantu baseThailand njenge "Temple of Wong-Tar-Shian". Ekuqaleni, leli thempeli laliyinkantolo encane kuphela yesiFunda e Wan-Chai. Ngemuva kwalokho, ngeminikelo eqoqwe, ithempeli lathuthela endaweni yamanje. Ngoba iWong-Tai-Sin ingunkulunkulu wezempilo, labo abathandaza kuleli thempeli bathandazela kakhulu ngempilo. Izitayela zamasiko nezakhiwo zivela kuConfucianism, ubuTaoism nobuBuddha. Vula: 07: 00 AM - 17: 30 PM Indawo: 2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin MTR
Njengoba ukuphela Komnyuziyamu waseKorea 3D eHong Kong, i-Trick Eye Museum Hong Kong inikeza iqoqo elihle kakhulu lezingcezu zobuciko ze-3D. Ifaka imidwebo ebusweni obucacile obonakala njengobukhulu bemitha emithathu ngokusetshenziswa kokukhohlisa okubonakalayo. Wamukelekile kakhulu ukuthi uthinte, ukhwele futhi uhlanganyele nemibukiso emangalisayo. Ngemuva kokuthwebula izinhliziyo zezigidi zezivakashi emhlabeni wonke, manje sehlele eHong Kong ePeak Galleria Mall. Ungakwazi futhi ukujabulela ukubukwa kweshawuni yamahhala yokubuka okuhle kwe-Harbour View.
Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo, iHong Kong ayisiwona wonke ama-skyscrapers futhi kunenzuzo ukuya emaphandleni (ngaphezulu kwe-70% yeHong Kong), kufaka phakathi amapaki ezwe namapaki asolwandle. Abaningi bayamangala ukuthola ukuthi iHong Kong empeleni iyikhaya lezindawo ezithile ezinhle nezindawo ezinhle zokomoya.
ILantau Island sikhulu ngokulingana nesiqhingi saseHong Kong futhi kufanelekile ukuthi uyihlole uma ufuna ukusuka kwizibani ezikhanyayo nokungcoliswa kwedolobha ukuthola isipelingi. Lapha uzothola imigwaqo evulekile yasemakhaya, amadolobhana okudotshwa kwendabuko, amabhishi aseceleni, izindlu zezindela nokuningi. Ungahamba ngesikebhe, ikamu, inhlanzi kanye nesithuthuthu esisezintabeni, phakathi kweminye imisebenzi.
Emanzini aseduze kwaseTung Chung esiqhingini saseLantau, kuhlala ama-Chinese White Dolphins. Lawa mahlengethwa aphuzi ngokwemvelo futhi ahlala endle, kepha isimo sawo njengamanje sisongelwa, ngesilinganiso sawo sabantu abakhona njengamanje phakathi kwe-100-200.
ISaen Kung Peninsula eNew Territories nayo iyindawo efanelekile yokuvakashela. Indawo yayo yezintaba kanye nendawo enhle yasogwini enhle kwenza lokhu kube indawo ekhethekile. Kunemizila yomibili evumayo nekhululekile kakhudlwana.
INorth East New Territories nayo idume ngemvelo yayo yemvelo. IYan Chau Tong Marine Park iseNorth East New Territories. Imizana embalwa yendabuko elahliwe ixhumene nezindlela zokuhamba ezintabeni kule ndima. INorth East New Territories ingenye yezindawo ezithandwayo zokuhamba izintaba ezishisayo kubantu bendawo.
I-Hong Kong UNESCO Global Geopark ihlanganisa indawo eyi-50 km2 ngaphesheya kwezindawo eziseMpumalanga naseNyakatho-mpumalanga New Territories. IGeopark yakhiwa amaGeo-Areas ayisishiyagalombili asatshalaliswa kuyo yonke iSifunda Sai Kung Volcanic Rock Region kanye neNortheast New Territories Sedimentary Rock Region. Izindawo eziningi zitholakala ngokuhamba ngesikebhe, amabhasi, amatekisi kanye nokuvakasha kwasendaweni.
Izitimela ezimfishane zokuhamba ngezinyawo (amahora we-2) zingatholakala eHong Kong Island naseNew Territories. Ungakhuphukela eVictoria Peak.
Ukuhamba ngezinyawo okulula okubukwa okuhle futhi umthunzi owamukelayo uqala ePeak bese uya ngasentshonalanga noLugard Road (ugandwe).
Kukhona ezinye iziqhingi ezingaphandle ezifanele zivakashelwe, isib: i-Lamma Island, iCheung Chau, iPing Chau, iTap Mun, iTung Lung Island.
IHong Kong Wetland Park eNew Territories iyipaki yokuphumula phakathi kwendawo yokudambisa imvelo. Umuntu angahamba ngenethiwekhi yezinyawo ezihamba ngamabhodi noma ahlole imnyuziyamu yesikhungo esikhulu sezivakashi.
I-Hong Kong Disneyland Resort ise-Lantau Island, cishe nge-12km empumalanga ye-Hong Kong International Airport. I-resort ibuye ibe nepaki ye-Disneyland, amahhotela amabili okuphumula kanye nendawo yokuzijabulisa echibini. Noma incane ngosayizi omncane kunamanye amapaki wesitayela seDisneyland kwenye indawo, ipaki yenziwe ekunwetshisweni ukuze inikeze ezinye izinto eziheha kakhulu (kufaka phakathi iToy Story Land Land neGrizzly Gulch esanda kuvulwa). Inikeza okuhehayo okuhle futhi emigqeni emifushane iningi lonyaka (ngaphandle kwesonto Lonyaka Omusha WaseShayina, iPhasika, i-Halloween kanye nenkathi kaKhisimusi). Futhi kushibhile kakhulu kunoku Tokyo I-Disneyland, i-Euro Disneyland noma leyo ese-USA - empeleni, ishibhile kakhulu kunamapaki wengqikimba amaningi yokungena nokudla.
I-Ocean Park isengxenyeni eseningizimu yesiQhingi saseHong Kong, futhi iyipaki elikhule nabantu abaningi bendawo baseHong Kong. Ngama-roller coasters nama-aquarium amakhulu aphelele, isagcwele ngezimpelasonto nemindeni kanye nezivakashi. Imoto yekhebula iyisithonjana, noma ilabo abethukile, manje sekukhona ujantshi omnandi ngaphansi kwentaba ekhipha i-diving engaphansi komhlaba. Kwabaningi, ithuba lokubona amaphara aseHong Kong kungaba yinto enqumayo. Abadala abancane bazokhangwa ebangeni ebanzi (nemvelo ye-adrenalin-pumping yemvelo) yokugibela.
I-Ngong Ping 360 esiqhingini saseLantau Island iyipaki lama-Buddhist themed elibonisa ukwakhiwa kwe-Imperial Chinese, imibukiso exhumanayo, imiboniso, izindawo zokudlela nezindawo zekhofi. Isici esivelele salolu hambo ukugibela intambo ende ende kakhulu eHong Kong exhasa ukubukwa okumangazayo. Ukugibela futhi kukuyisa kwiBuddha enkulu kunazo zonke engaphandle ehleliwe.
Avenue of Stars kanye A Symphony of izibani
Uhlobo lwaseHong Kong lweHollywood Walk of Fame, i-Avenue of Stars lugubha izithonjana ze-Hong Kong cinema kusukela ngekhulu leminyaka elidlule. Ukuphakanyiswa kolwandle kunikeza ukubukwa okuhle, imini nobusuku, kweVictoria Harbour nesibhakabhaka sakhona esibukekayo. I-Avenue ingafinyelelwa esiteshini sase-East Tsim Sha Tsui MTR noma esiteshini sebhasi i-Star Ferry.
I-Avenue of the Stars nayo iyindawo enhle yokubona i-A Symphony of Lights, ukukhanya okumangazayo ne-laser show evumelaniswa emculweni futhi ihlelwe njalo ebusuku e-20: 00. Lona "Ukukhanya Kakhulu Kokuphela Kokuphela Nombukiso Womhlaba" owaziwa yiGuinness World Record. NgoMsombuluko, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu, umbukiso okhanyayo ubhalwe ngesiNgisi. NgoLwesibili, ngoLwesine nangoMgqibelo kuseMandarin. NgeSonto kuseCantonese. Ngenkathi kuseTsim Sha Tsui emgodini wamanzi, izibukeli zingaphonsa imisakazo yazo kuFM103.4MHz for English naration, FM106.8MHz for Cantonese or FM107.9 for Mandarin. Umbukiso wokukhanya uxhaswe ngama-fireworks afanele ukukubona. Abathwebuli bezithombe kufanele bafike emaminithini we-30-60 kusenesikhathi ukuthola ukubonwa okungakahleliwe.
I-Central and Western District Promenade
Indawo esanda kubuyiselwa emuva phakathi kweCentral Ferry Pier neConference Center esiqhingini saseHong Kong yakhiwa njengendawo yokuzilibazisa enikeza indawo evulekile (engavamile enkabeni yeHong Kong), iHong Kong Observation Wheel, indawo yokuhlala yangaphandle, amathayela endawo enamanzi, imicimbi yesizini enkulu ukubuka kwesibhakabhaka saseKowloon kanye nama-skyscrapers aseCentral (uma uthanda ama-engeli akho abanzi), ikakhulukazi ebusuku.
Amabhishi - amachibi okubhukuda - ukuhamba ngomkhumbi - ukuhamba ngezinyawo - amatende - ukugembula eHong Kong
Ukudla - isiphuzo eHong Kong
IHong Kong ingelinye lamadolobha aphephe kakhulu emhlabeni. Kodwa-ke, ubugebengu obuncane bungenzeka futhi abahambi bakhunjuzwa ukuthi basebenzise ukuqonda okujwayelekile futhi baqaphe lapho behlala eHong Kong.
Imbangela eyodwa yokugula ukuguquguquka kwezinga lokushisa okukhulu phakathi kwe-35 ° C enomswakama ehlobo sezulu sangaphandle nangaphandle kwe-18 ° C izakhiwo ezinomoya opholile nezitolo ezinkulu. Abanye abantu bathola izimpawu ezibandayo ngemuva kokuhamba phakathi kwalokhu okweqisa. Unconywe ukuba uphathe i-sweatshi ngisho nangehlobo-sehlobo.
Ukushiswa unhlangothi kuyaye kuvame lapho kuhanjwa ngezinyawo. Phatha amanzi anele futhi uthathe ukuphumula okuhleliwe ngaphambi kokuba uzizwe ungathandeki.
Amanzi ompompi eHong Kong afakazelwe ukuthi ayaphuzwa, yize iningi labantu bendawo lisathanda ukubilisa nokubandisa amanzi alo okuphuza lapho lithathwa empompini.
Ngokungafani ne-Mainland China, ukungena kwe-Intanethi akuhlungwanga eHong Kong. Onke amawebhusayithi afinyeleleka eHong Kong.
I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala emahhotela amaningi, ezitolo ezinkulu, ezitolo zekhofi, esikhumulweni sezindiza, emabhasini athile, ezitobhini zamabhasi / eziteshini, eziteshini zeMTR, ezakhiweni zikahulumeni nasemitatsheni yomphakathi.
Hlola i-Hong Kong futhi uvakashele
IMacau, ikoloni langaphambili lamaPutukezi futhi eyindawo enkulu kunazo zonke yokugembula emhlabeni, sekusele ihora nje iTurboJet Isakhiwo sezikebhe siseduze nesiteshi saseSheung Wan MTR esiqhingini saseHong Kong. Ama-feri ejwayelekile ajwayelekile ayatholakala naseTsim Sha Tsui, Kowloon nase-Hong Kong International Airport.
UZhuhai ezweni lase China, ngaphesheya komngcele ukusuka eMacau, uhamba imizuzu eyi-70 ngesikebhe.
Taiwan kusele nje isikhathi esingaphezu kwehora ukuhamba ngendiza. Amathikithi Taipei kushibhile, futhi ukusuka lapho kulula ukuhlola sonke isiqhingi.
IShenzhen, iBoomtown yaseChina engaphesheya komngcele ingafinyelelwa yizinsizakalo zezitimela zeMTR cishe ngemizuzu ye-40. Qaphela ukuthi uma ungeyena owabahlali baseHong Kong, abaseJapan noma oyisakhamuzi saseSingapore, uzodinga ukuhlela kwangaphambili i-visa ukuze ungene kwi-Shenzhen. Isitimela siyasebenza uma umagange ngokuthenga njengoba unqamuka esikhungweni sezentengiso saseLo Wu. Enye indlela ehlukile, ikakhulukazi uma uqala kulesi siqhingi ngesikebhe esiya eShekou esithatha imizuzu eyi-50.
IGuangzhou, inhloko-dolobha yesifundazwe saseChina iGuangdong, ingafinyelelwa ngesitimela kungakapheli amahora we-2. Uma usesabelomali, amabhasi amaningi emingcele ayatholakala kulo lonke elaseHong Kong. Lolu hambo luzothatha isikhathi esingaphezu kwamahora we-3, okubandakanya ukuhamba ngamanani emngceleni nokushintsha amabhasi.